Izimemezelo zomphakathi Archives - Isambane News
Category: Izimemezelo zomphakathi
Izimemezelo zomphakathi Izindaba Okufakiwe
UMongameli Cyril Ramaphosa ngoLwesine, uzogubha uSuku Lwentsha eMthatha esifundazweni saseMpumalanga Kapa
Kulo nyaka sigubha iminyaka engu-46 abafundi bavukela umbuso ngo-1976. Ukugujwa kwalolu suku kuzogujwa ngaphansi kwesiqubulo esithi “Ukuthuthukisa Impilo Esimeme Namandla…
Izimemezelo zomphakathi Okufakiwe
U-Eskom umise ukucishwa kukagesi – okwamanje
Inkampani ephehla ugesi u-Eskom imemezele ukumiswa kokucinywa kukagesi ngeSonto ngenxa “yokuba ngcono kancane” kwamandla okuphehla ugesi. U-Eskom usuqale ukucisha ugesi…
Umlayezo obalulekile wabasebenzisa ama-TV ane-Ariel
Kuthiwa uma ungomunye wezigidi zemindeni enethelevishini esebenzisa i-DSTV, OpenView, StarSat noma izinkundla zokusakaza, ngeke uphazamiseke njengoba ukusakazwa kwe-analogu kuzokhishwa kudijithali.…
UMengameli Ramaphosa uzokhuluma nesizwe mayelana nokubhekana nezikhukhula ezicekeleke phansi amakhaya nengqalasizinda
UMengameli Cyril Ramaphosa uzokhuluma nesizwe ngehora lesishiyagalombili ebusuku ngoMsombuluko mayelana nempendulo kahulumeni mayelana nezikhukhula ezindaweni ezithile KwaZulu-Natal nase-Eastern Cape. Lokhu…
[Covid-19] – UMongameli Ramaphosa uzokhuluma nesizwe namhlanje ebusuku
UMongameli Cyril Ramaphosa uzokhuluma nesizwe namhlanje ngo-20h00 kusihlwa, 04 April 2022, mayelana nentuthuko yeNingizimu Afrika ekubhekaneni nobhubhane lwe-COVID-19. #IsambaneNews #SibuyaNazoZishisa
Uma isibonelelo sakho se-350 sinqatshiwe yenza lokhu okulandelayo
Kusenesikhathi sokufaka isicelo sesibonelelo sikahulumeni sama-350, esivulekele zonke izakhamizi zaseNingizimu Afrika ezingaqashiwe njengamanje. Uma ufake isicelo sesibonelelo sikahulumeni se-350 futhi…
Isibonelelo sika-R350 sesizoholelwa ezitolo zakwaShoprite noCheckers
Njengoba abantu abangaphezu kwezigidi eziyishumi behlomula njalo ngemali yesibonelelo sabangasenzi seSocial Relief of Distress R350 (SRD), kuhlolwa izinhlelo ezahlukene mayelana…
I-Loadshedding izokwehliselwa esigabeni sesithathu kusukela ngo-9pm namuhla kuze kube u-5am ngoLwesihlanu.
I-Loadshedding izokwehliselwa esigabeni sesithathu kusukela ngo-9pm namuhla kuze kube u-5am ngoLwesihlanu. Ngemuva kwalokho isigaba sesibili sizoqala ukusebenza kuze kube ihora…
Isexwayiso Izimemezelo zomphakathi Okufakiwe
ISouth African Weather Services isikhiphe isexwayiso sokuthi kulindeleke ukuthi kube nemvula ehambisana nokuduma okukhulu kwezulu kanye nezikhukhula ngoLwesihlanu ntambama KwaZulu-Natal.
ISouth African Weather Services isikhiphe isexwayiso sokuthi kulindeleke ukuthi kube nemvula ehambisana nokuduma okukhulu kwezulu kanye nezikhukhula ngoLwesihlanu ntambama KwaZulu-Natal.…
USiphiwe Tshabalala noReneilwe Letsholonyane babuyela kuKaizer Chiefs
UKelly Khumalo: “Akekho owayazi ukuthi uSenzo wayengubani ngaphambi kwami!”